Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulah kuleh magaalada Muqdisho – Somali Top News
April 24, 2019 Somali Top News	0 Comments
Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in Maanta oo Arbaco ah kuna beegan 24/4/2019 ay Xaruntooda Magalada Muqdisho ku yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa.
Ajandeha Kulanka Maanta ayaa waxa ah warbixin ay ka dhageysanayaan guddiga madaxa banaan ee xuduudaha, iyada oo Kulanka ay hortegi doonaan Xubnaha Gudigaas si ay xildhibaananda warbixino ula wadaagaan.
Xildhibaannada golaha Shacabka ayaa xalay loo diray farriimo lagu wargelinayey in Maanta oo Arbaco ah uu jiiro kulanka Golaha Shacabka,isla markaana ay soo xaadiraan.
Xildhibaananda Golaha Shacabka ayaa Isniintii la soo dhaafay ee todobaadkaan aan yeelan wax kulan ah, iyada oo kala-fadhiyadii u dambeeyey ee Golaha Shacabka kulamadooda qaar ay u baaqanayeen sababo la xiriira kooram la’aan.
← Madaxweyne Farmaajo oo Talooyin wax ku ool ah ka soo qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Somalia: “I deserve the opportunity to learn” – Farhiya’s story →
Dab khasaaro kala duwan sababay oo ka kacay magaalada Garoowe
Qarax miino oo duleedka Muqdisho lagula eegtay Injineero dhisayay wadada Muqdisho iyo Afgooye
Xiisad dagaal oo ka taagan deegaano katirsan gobalka Mudug oo dilal aanoo qabiil ah ay ka dhaceen